Allgedo.com » Gudoomiyaha degmada Hilwaa oo ka badbaaday weerar lagu qaarajin lahaa.
Home » News » Gudoomiyaha degmada Hilwaa oo ka badbaaday weerar lagu qaarajin lahaa. Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Gudoomiyaha degmada Hilwaa Cumar C/lle Jacfaan ayaa ka badbaaday fal la doonaayay in habeenkii xalay ahaa lagu qaarajiyo xilli uu ku sugnaa hoyga uu ka deganyahay degmadaasi.
Ciidamo ka mid ah Xarakada Al-shabaab ayaa la sheegay in weerar lama filaan ah ay ku qaadeen hoyga uu deganyahay gudoomiyaha iyo sidoo kale saldhiga degmadaasi, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare dhimasho ah.
3 qof ayaa halkaasi ku geeriyootay 2 kalena dhaawac ayaa soo gaaray waxaana gudoomiyaha degmadaasi Cumar Jacfaan uu sheegay in ay iska difaaceen ciidankii rabay inay isaga dilaan.
Ma’ahan markii ugu horeysay oo ciidamada Xarakada Al-shabaab ay isku dayaan inay qaadaan weerar ay ku doonayaan inay ku dilaan gudoomiyaha degmada Hilwaa ee dowladda KMG.